Eyona ndlela ibalaseleyo yokulinganisa nasiphi na isicelo kwi-intanethi ukwahlulahlula ujongano lwakho kumaleko wedatha usebenzisa iApplication Programming Interface (API). Ukuba umtsha kuphuhliso, i-API ngumbono olula. Kanye njengokuba ungena kwaye usebenzisa usetyenziso lwewebhu ngesikhangeli kunye nothotho lwezicelo ze-HTTP, isicelo sakho singenza into efanayo nge-REST API kunye nenkqubo. Njengabantu abaninzi bangena kwinkqubo, bona
NgoMvulo, Novemba 13, 2017 Douglas Karr
Amaqabane ethu e-250ok, iqonga lokusebenza kwe-imeyile, kunye neHubspot kunye neMailCharts zibonelele ngedatha ebalulekileyo kunye nokwahluka kule minyaka mibini idlulileyo yedatha yoLwesihlanu oMnyama kunye noMvulo weCyber. Ukukunika elona cebiso lilungileyo, uJoe Montgomery wama-250ok wadibana noCourtney Sembler, uNjingalwazi webhokisi yeebhokisi kwiHubSpot Academy, kunye noCarl Sednaoui, uMlawuli weNtengiso kunye noMsunguli weNtsebenziswano eMailCharts. Idatha ye-imeyile ebandakanyiweyo ivela kuhlalutyo lweMailCharts lwe-1000 ephezulu
Yintoni uQinisekiso lwe-imeyile? Isebenza njani ukuHanjiswa?
NgoLwesihlanu, Novemba 14, 2014 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Kuninzi ukungazi ngaphandle phaya kubathengisi kunye neengcali ze-IT xa kuziwa ekuhanjisweni kwe-imeyile kunye nokubekwa kwebhokisi engenayo. Uninzi lweenkampani zikholelwa nje ukuba yinkqubo elula apho uyithumela khona i-imeyile… kwaye ifika apho ifuna ukuba khona. Ayisebenzi ngale ndlela-ababoneleli ngeenkonzo ze-intanethi banezixhobo ezininzi abanazo zokuqinisekisa umthombo we-imeyile kwaye baqinisekise njengomthombo odumileyo ngaphambili